15 / 05 / 2021 15 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 365 Views စာ0မှတ်ချက် 41686 မှော် Acrobatics, Friends, မြင်း, Lego, Lego Friends, LEGO.com, မျှော, မှော်, မှော် Funfair, Olivia, Stella, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021
တရား ၀ င်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အမျိုးမျိုးသောစာရင်းများကိုဖော်ပြထားသည် Lego Friends ယခင်ကမသိသောတစ်ခုအပါအဝင်သူတို့လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲများ၏အသေးစိတ်နှင့်အတူနွေရာသီအစုံ။
41686 မှော် Acrobatics အပေါ်ထင်ရှားခဲ့သည် LEGO.com ၏ကျန်များအတွက်တရားဝင်မိတ်ဆက်အတူ Friends နွေရာသီအကွာအဝေး။ 223-piece set တွင်အဓိကကျသည့်မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးပါ ၀ င်သည်။
မြင်းဆွဲက cart အသေးငယ်တဲ့အရုပ်တွေကိုလှည့်ပတ်ဖို့ကြီးမားတဲ့ circular element ကိုသုံးပြီးရထားကရှေ့ကိုရွေ့နေတုန်းမှာနောက်တစ်ရပ်ကတော့အရုပ်သေးသေးလေးတွေလည်ပတ်နေပြီးသူတို့ကကွင်းတရံနဲ့ကပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်
Olivia သည် Stella အမည်ရှိဇာတ်ကောင်အသစ်နှင့်အတူပါ ၀ င်သော်လည်းနှစ်မျိုးစလုံးသည်စတိုင်ကျသောမျက်နှာဖုံးကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်တွင်မတွေ့ရသည့်အားကစားဝတ်စုံများဖြစ်သည်။
အစုသည်စီးနင်းခြင်း၊ အတွေ့အကြုံများနှင့်မှော်လှည့်ကွက်များစွာနှင့်အတူမှော်အပန်းဖြေပွဲသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အဖွဲ့ကိုအာရုံစိုက်သည့် subtheme အသစ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကျန်အကွာအဝေးကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.
ဒီအစုသည်ကျန်၏ကျန်အတူဖြန့်ချိပါလိမ့်မယ် Lego Friends ကအတည်ပြုအဖြစ်ဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်နွေရာသီအစုံ LEGO.com. 41686 မှော် Acrobatics သငျသညျ£ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 ပြန်ထားလိမ့်မည်။
← Lego ၏တရားဝင်ပုံများ Marvel 76191 Infinity Gauntlet ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
Lego Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာပြန်လည်သုံးသပ် →